यो समय भनेको आफू बच्नु र अरुलाई पनि बचाउने बेला हो - Wnepal.com
सन्तोष कोइराला, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड
सन्तोष कोइराला युवा बैंकरहरुको पंक्तिमा चिनाई राख्न पर्ने नाम होइन । कोइरालाले बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंकमा करिब २ दर्शक विताए पछि हाल माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ छन् । करिब २ दर्शक बैकिङ्ग इतिहासमा जीवन विताएका कोइराला कम उमेरका सीइओहरुको पंक्तिमा पर्दछन् ।
बैंकर कोइराला एनआरएनको ठूलो लगानी रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको सीइओमा २०७७ साल बैशाख १ बाट लागु हुनेगरी नियुक्त भएका छन् । अहिले बिशम अवस्थामा यो बैंकले के कस्ता बैकिङ्ग सुविधा दिएको छ ?
अहिले विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले नेपाल त्रसित बनाएको छ । चैत्र २५ गतेसम्म सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको छ । मानिस सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको बलियो निजी क्षेत्रको बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा देखिन्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको यस बैंकले डिजिटल करोबार गर्न नसक्ने एटिएम कार्ड नभएका ग्राहकलाई कारोबार गर्न शाखाहरु खोलेर सेवा दिइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परेको छ ? माछापुच्छ्रे बैंक मात्रै खुलेको छ कि ? कारोबार पनि भइरहेको छ । बैंकका कर्मचरीहरुको स्वास्थ्य अवस्था बारे बैंक कति सचेत छ । बैंक र बैंकरहरुले यो विशम परिस्थितिमा राज्यलाई कस्तो योगदान दिएका छन् । यीनै विषयमा युवा बैंकर एवं माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइरालासंग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानी ।
० देश पूर्ण लकडाउनमा छ । जनता कोरोना भाइरसबाट आतंकित छन् । यस्तो सम्बेदनशील अवस्थामा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले चाही कसरी कस्तो सेवा दिएको छ ?
हामीले आवश्यकता हेरि उपत्यकाका तीन जिल्लामा १÷१ वा शाखा सञ्चालनमा गरि सेव दिएका छौं । उपत्यका बाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग समन्वय गरी केही शाखा खोली सेवा दिएका अवस्था छ ।
डिजिटल बैंकिङ्ग नभएका, एटिएम कार्ड नभएका हजारौं ग्राहकहरुलाई १/२ घण्टा शाखा खोली सेवा दिएको अवस्था छ । यो बेला घरबाटै डिजिटल बैकिङ्ग कारोबार गर्र्नु नै उचित हुन्छ । हामी र हाम्रा कर्मचारी साथीहरु पनि घरबाटै काम गरेका छन् । यो समय भनेको आफू बच्नु र अरुलाई पनि बचाउने बेला हो ।
० राज्यले बैंकका ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ल्याएका सहुलियतका प्याकेजलाई तपाईले चाही कसरी लिनु भएको छ ?
यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा दिएका छौं । अहिले केही सुविधा आएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सर्कुलरलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । विद्युतीय कारोबारमा पनि शुल्क नलिने भन्ने कुरा आएको छ ।
अर्कोतिर चैत्र मसान्तमा १० प्रतिशत ब्याजमा मिनाह दिनसक्ने भनेको छ । बैंकले आफ्नो आम्दानीबाट दिने भन्ने कुरा छ । राज्यले गरेको निर्णय पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । दायित्व हो । असार मसान्तसम्म कर्जाहरुको सावाब्याज तिर्ने समय दिएको छ ।
यसले ग्राहकलाइ ठूलो राहत मिलेको देखिन्छ । भूपेन्द्रजी । हामी यहि समाजका मान्छे हौं । समाजलाई केही गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो पनि सोच छ । अप्ठयारो अवस्थामा ग्राहकहरुलाई साथ र सहयोग हामी बैंक र बैंकरले नदिए कसले दिन्छ ? तर, बैंक बाहिर रहेका लाखौं मजदूर, कामदार र गरिब जनताका लागि राज्यले छिटो राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
० यो कोरोना भाईरसको महामारकिा बेला कर्मचारी साथीहरुको सुरक्षाबारे कति चिन्तित रहनु भएको छ सीइओ साब ?
भूपेन्द्र जी, महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । हामी कर्मचार िसाथीहरुको स्वास्थ्यबाटै अत्यन्तै सचेत र सजक छौं । ती साथीहरुले केही राहतका कार्यक्रम ल्याउने भएका पनि छौं ।
कर्मचारी साथीहरुको हाम्रा सम्पत्ती हुन् उहाँहरुको सुरक्षा नै हामी बैंकरहरुको पहिलो दायित्व हो । त्यसकारण हामीले माक्स, सेनिटाइजर र पञ्जा प्रयोग लगायत एटिएमलाई समेत सेनिटाईजिङ्ग गरेका छौं । कर्मचारी कम मात्रामा छन् । ग्राहक अझै कम मात्रामा आएको अवस्था छ । कारोबार सानो भएको छ । यो अवस्था घरबाटै सूचना प्रधिवीबाट डिजिटल बैकिङ्ग गर्नु उचित हुन्छ ।
० कोरोना भाईरसंग लड्न राज्यले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको कोषमा तपाईको बैंकको सहयोग रहन्छ त ?
किन नरहने हामी पनि यहि समाजको मानिस हौं । हाम्रो पनि यो समाजमा केही दायित्व पक्कै छ । बिपतको बेला हामी राज्यसंगै हिडेको प्रसस्तै उदाहण पनि छन् ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले राष्ट्रिय कोषमा ५१ लाख रकम दिएको अवस्था छ । सबै ७ वटै प्रदेशमा ५/५ लाख राहत स्वरुप दिएका छौं । यसको अलवा यो लकाउनमा गरिब मजदुर, कामदारहरु भोकै नरहुन भनेर हामीले २० लाख बराबरको मुल्य पर्ने राहत सामाग्री दियौं । ५ हजार लि.को पानी ट्याङ्की प्रहरीको सहकार्यमा विभिन्न ठाउँमा राखी दिएको अवस्था पनि छ ।
यी सबै हिसाब गर्ने हो भने हामीले राज्यलाई १ करोड ६ लाख दिएको अवस्था छ नि ।
० चैत्र मसान्तमा बैंकहरुको रिजल्ट पनि बाहिर आउने बेला हो । यो कोरोना महामारीले नाफामा पक्कै फरक त पर्ला नि सीइओ साब ?
यो बेला आफू बच्ने र जनतालाई बचाउने बेला हो । राज्यले लागु गरेको लकडाउनलाई पालना गर्नु हो । जीवन रहे अरु कुरा त पछि आईहाल्छ नि । नाफा घाटा यो बेला हेर्ने होइन । नाफामा त फरक पर्ने नै छ । नाफा भन्दा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरुरी छ । नाफा कमाउला, अर्थतन्त्र बचाउला तर, अहिले जनता बचाउने हो ।
सरकारले लाखौं गरिब, जात जातिका भाषा भाषीका मजदुर र कामदारका लागि तत्कालै उचित राहत ल्याउनु प¥यो । यो बेला ठूला भन्दा साना साना कुरामा ध्यान दिने बेला हो । रोजी रोटीका कुरा होलान । ग्यास, नुन, तेल, चामल, दालका कुरा होलान । राज्यले यो बारे तत्कालै सोच्नु प¥यो नि ।
० लामो लकडाउनले एटिएममा पैसा सकिएको र साँझ पदै गर्दा बन्द हुने गरेको गुनासो बढेको छ नि ?
भूपेन्द्र जी यो सबै झुट हो । यो बेला यो हुनै सक्दैन । किन भने हामी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थाले कुनै शुल्क एटिएममा नलिने निर्णय नै गरेको अवस्थामा छ ।
अर्को कुरा एटिएम कहिले बन्द हुन्दैन । २४ सै घण्टा खुल्ला छन् । पैसा प्रसस्त छ । कम कारोबार एटिएममा भएको छ । कसरी पैसा सकिन्छ । यो त आतंक फैलाउने कुरा भयो झुट बोल्ने ? हामीले एटिएमलाई समेत सेनिटाईज गरेका छौं । ढुक्क भए हुन्छ । हामी हाम्रा लाखौं ग्राहकलाई पैसा नभएर दाल, चामल, ग्यास, पानी र औषधी किन्नबाट बञ्चित पटक्कै गर्दैनौ । हामीलाई फोन गरेर पनि सेवा लिन आग्रह गर्दछु ।
अर्को कुरा हामी माछापुच्छ्रे बैंक २७ वाणिज्य बैंकमा एटिएमको ठूलो सञ्जाल भएको बैंक भएकोले हामी यस कुरामा अति नै चनाखो र सचेत छौं ।
० विश्व बजारमा कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्र तहसनहस झै बनाएको छ । यसले नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीमा कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ ?
देशको अर्थतन्त्रको मुटु, कलेजो भनेकै बैंकिङ्ग प्रणाली हो । यसले नेपाली बैकिङ्ग प्रणालीमा असर नपर्ने कुरै छैन । चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालको बैकिङ्ग प्रणाली तर हतोत्साहित भई हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको खुट्टा भाँचिए पनि हात भाचिएको छैन । भोली यसलाई बनाउला । तर, आजको आवश्यकता भनेको मानवीय क्षती बचाउनु आफू बच्नु र अरुलाई बचाउनु नै हो । अरु कुरा आज नभए भोली त होला नि ।
० लाखौं ग्राहक र नेपाली जनतालाई केही सन्देश दिनु हुन्छ । यो विशम अवस्थामा सीइओ साब ?
पक्कै पनि हामीलाई शाखा खोल्ने रहर थिएन तर हामी अत्यावश्यक भित्र पर्ने बस्तु भएकोले केही शाखा खोली सेवा दिएका छौं । तापनि हामी सचेत छौं । यो विषम परिस्थितिमा बैंकहरुले सेवा दिनु पनि चुनौतिपूर्ण र जोखिम छ । तर, हामीले दिइरहेको अवस्था पक्कै छ ।
पहिलो कुरा त आफू बचौं अरुलाई पनि बचाउ ।
मानव रहे जीवन रहे, सबै कुरा देखिन्छ । त्यसकारण घरभित्रै बसौ । अर्को कुरा आज कोरोना भाईरसले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र रोहिरहेको अवस्था छ । हजारौं मरेका छन् । लाखौं कोरोना भाईरस बिरुद्ध छटपटाईरहेको अवस्था छ ।
सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण पालना गरौं घरबाटै अफिसको काम गरौं घरबाट वाहिर नजाउ । जीवन रहे सबैहुन्छ । जीवन नरहे केही हुँदैन स्वास्थ रहौं । सुखी रहौं । घरमै बसी नयाँ नयाँ सृजना गरौं मोबाइलबाटै डिजिटल कारोबार गरौं । परिवारसंगै दिन विताउ ।
अर्को कुरा विदेशबाट आउनु भएका सबै साथीहरु घरमै क्वाराइनटाइनमा बसौ । केही भए अस्पताल जाउँ । आफूलाई बचाऔं र अरुलाई पनि बचाउ । भन्न चाहान्छु ।